ကင်မရာရှေ့ပြေးသွားပြီး မန်ဖန်တွေအတွက် ပျော်စရာသတင်းပါးခဲ့တဲ့ ဟာလန်းနဲ့ဆန်ချို – FBV SPORT NEWS
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေထဲက မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းက အသဲအသန်လိုချင်နေခဲ့တဲ့ ဆန်ချိုနဲ့ပက်သက်ပြီး ပျော်စရာမက်ဆေ့တစ်ခုကို ဟာလန်းနဲ့ဆန်ချိုဟာ ကင်မရာရှေ့ပြေးသွားပြီး မန်ဖန်တွေအတွက် သတင်းစကားပါးလိုက်ပါတယ်။
ဒေါ့မွန်ကြယ်ပွင့်တွေဖြစ်တဲ့ ဟာလန်းနဲ့ဆန်ချိုတို့က ပိုကယ်ဖိုင်နယ်ပွဲမှာ RB LEIPZIGကို ၄ဂိုး ၁ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရဗိုလ်စွဲပြီးတဲ့နောက် မန်ဖန်တွေအတွက် ပျော်စရာ ပဟေဋိစကားတစ်ခွန်းကို ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်.
တိုက်စစ်မှူးဟာလန်းကို ဆိုလ်းရှားက ဒီနှစ်နွေအတွက် နံပါတစ် ပစ်မှတ်ထားထားပြီး ဆန်ချိုကို စိတ်ဝင်စားမှုလျော့ကျသွားတယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြကြပေမယ့် ဟာလန်းပြောလိုက်တဲ့စကားအရဆိုဆန်ချိုဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ နက်နဲတဲ့သဘောတူညီမှုတွေရနေပြီလို့ ယူဆလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဆန်ချိုနဲ့ပက်သက်ပြီး ဗိုလ်လုပွဲဖလားရလို့ အသင်းဖော်တွေကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတာတွေမလုပ်ခင် ဟာလန်းက ကင်မရာရှေ့ပြေးသွားပြီးခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။
“He is the man, He is the man.This Guy is the man (သူကMan ဒိလူက Man” ဆိုပြီး ဆန်ချိုကိုညွှန်းဆိုပြီးပျော်ရွှင်စွာပြောဆိုခဲ့တာပါ။
ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပက်သက်ပြီး မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဖန်အဖွဲ့ထဲကတစ်ယောက်က”ဟာလန်းဟာယူနိုက်တက်ကိုလာနိုင်တယ်။ ဆန်ချိုလည်း ယူနိုက်တက်ကိုလာနိုင်တယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးက ယူနိုက်တက်ကိုလာနိုင်တယ်”ဆိုပြီး သုံးသပ်ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်က ဆန်ချိုဟာလန်းနှစ်ယောက်လုံးနဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့ ဆက်သွယ်မှုတွေရှိထားတာဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ဆန်ချိုဟာ ယူနိက်တက်အနေနဲ့ သူ့ကိုတစ်ကယ်လိုချင်တာဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီထက်ပိုပြီးတက်ကြွဖို့လိုကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။
“ယူနိက်တက်ကို ကျွန်တော်စိတ်ပျက်မိတယ်။ ရက်ဖို့စ်နဲ့တောင်မရောက်လာသေးတဲ့ရက်တွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေကစားမယ်ဆိုတာပြောဖြစ်ခဲ့တယ်”လို့အားမလိုအားမရ ဆန်ချိုကပြောခဲ့ပါတယ်။
ဆန်ချိုဟာ ဒီနစ်ရာသီမှာ ၁၆ဂိုးသွင်းယူထားပြီး ဂိုးဖန်တီးမှု ၁၉ကြိမ်ထိပြုလုပ်ထားပြီး ဒေါ့မွန်အသင်းက ဆန်ချိုကို အသင်းကဒီနှစ်နွေမှာ ထွက်ခွာခွင့်ပေးထားတဲ့အပြင် ဆန်ချိုဈေးကိုလည်း ပေါင်၇၇သန်းထိလျော့ချပေးထားပါတယ်.
လက်ရှိမှာ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းဟာလည်း ဂုတ်သွေးစုပ်ဂလေဇာထွက်ခွာသွားဖို့ ဆန္ဒပြမှုတွေမြင့်တက်နေလို့ ဂလေဇာဟာ ပရိတ်သတ်တွေကို ပျားရည်နဲ့ဝမ်းချဖို့ဆန်ချိုကို တစ်ကယ်ခေါ်ယူတော့မလားဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂလေဇာသာကတိတည်ခဲ့ရင် ယူနိက်တက်ဟာ ကစားသမား ၈ယောက်လောက်ထိရောင်းချပြီးဟာလန်းနဲ့ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူသွားနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ Metroသတင်းက သုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ်. မန်ဖန်တွေရောဘယ်လိုထင်လဲ။ ဆန်ချိုနဲ့ဟာလန်းကို အိုးထရက်ဖို့က ကြိုဆိုကြမှာလား